“Ambohimalaza Time Attack 1.0”: tompondaka izay manana fe-potoana ambany indrindra | NewsMada
Mihazakazaka ny fisoratana anarana handray anjara amin’ny Ambohimalaza Time Attack 1.0. Fifaninanana natokana ho an’ireo moto matanjaka “grosses cylindrées”, hatao ny alahady 29 novambra, ho avy izao. Tsy ho ela dia ho feno tanteraka ny 50, fetrisa amin’ity fihaonana ity.
Nambaran’ny mpikarakara fa ho tompondaka izay manana fe-potoana ambany indrindra. Amin’ny maha adim-pamantaranandro ity Ambohimalaza Time Attack 1.0 ity, fotoana no henjehin’ireo mpifaninana rehetra. Raha ny endriky ny hazakazaka, hisy aloha ny andrana mandritra ny adiny iray ka malalaka ny fanatontosan’ny mpifaninana rehetra izany. Rehefa tapitra ny fotoana, misy dingana roa, hakana ny fe-potoana na “essai chrono” ka mandeha tsirairay ireo mpandray anjara, izay mielanelana 1 mn ny fiaingan’ny tsirairay. Mandeha miakatra manomboka eo Ambohimalaza mihazo an’Imerinkasinina, izay misy halavirana, 4, 03 km izany.
Handrombaka ny amboara ny mpifaninana manana fe-potoana kely indrindra. Tsiahivina fa mizara ho sokajy fito ireo mpifaninanana ka misy ireo hifaninana ao amin’ny Chopper, ny ao amin’ny Trail sy ny Maxiscooter, ny Super motard, ny Roadster, ny sportive ary ny Custom Vintage.
Mpikarakara ity hetsika “Ambohimalaza Time Attack 1.0” ity ny X’Inov créateur d’impact sy ny Bira Moto Club ary ny Moto Club Mada, izay eo ambany fiahian’ny federasiona malagasy ny motocyclisme (FMaM), izy ity.